Izingxenye ezishibhile ze-CNC zokugaya izingxenye zensimbi yensimbi ifektri nabaphakeli I-Ouzhan
Ngokuvamile, ukuphakama kokuqukethwe kwekhabhoni yensimbi yensimbi, kukhula ubunzima kanye namandla amakhulu, kepha ukwehla kwepulasitiki. I-Carbon steel CNC milling inezinhlobo ezahlukahlukene zezicelo futhi ilungele izingxenye eziningi zemishini. Ouzhan ngeke efanele oyifisayo machining izingxenye ngokuvumelana imidwebo yakho kanye nezidingo. Izingxenye zokugaya izingxenye zemishini zikulungele kakhulu ukucubungula izinhlobo zomsebenzi zokusebenza ezifana nezingxenye ezigobile namathuluzi wokwenza amathuluzi agobile. Izingxenye ezigobile zisetshenziswa kakhulu emikhakheni yezimboni, njengama-turbine blades, ama-propellers wemikhumbi, imikhiqizo yezimboni enezindawo eziyindilinga eziyindilinga, njalonjalo. Ngokuvamile, indawo egobile icutshungulwa ngokugaya.
ICarbon Steel CNC Milling-Precision Carbon Steel Milling Parts Machining Center
Izinzuzo ze-Ouzhan carbon steel izingxenye ezisikiwe
Isevisi yokugaya i-Carbon steel steel-China Shanghai CNC carbon steel milling parts manufacturer
I-Ouzhan ngumkhiqizi ohlanganisa imboni kanye nezohwebo, enikezela ngosizo olulodwa lokuguqula nokwenza izinsizakalo zomshini wokugaya umshini. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ingacubungula i-carbon steel ngezingxenye ezizinzile nezinokwethenjelwa ezinemba kakhulu ze-CNC. Lezi zingxenye zemishini zenziwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusetshenziswa, ezitholakala kubahlinzeki bezingxenye ezisebenza kahle emakethe. Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile nelingcweti kanye nokuphathwa kahle nokusebenza kwesistimu kungaqinisekisa ukukhiqizwa okuphelele kwezingxenye zomshini wekhabhoni wensimbi. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo ye-CNC yensimbi yensimbi enikeziwe ihambisana ngokuqinile nezindinganiso zekhwalithi futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni. Futhi singahlinzeka ngamanani entengo wokuncintisana wemikhiqizo yokugaya i-carbon steel CNC kumakhasimende ethu abalulekile.
Izingxenye ze-Ouzhan carbon steel milling izingxenye zemishini eziyingxenye
(1) Milling izingxenye indiza
Izici zezingxenye zendiza ziyakhonjiswa ukuthi indawo eyenziwe ngomshini ingaba ngokufana nendiza enezingqimba, iqondane nendiza evundlile, noma i-engeli engaguquki nendiza evundlile; iningi lezingxenye ezicutshungulwe kumshini wokugaya we-CNC yizingxenye zendiza, kanti izingxenye zendiza yilezi Uhlobo olulula kakhulu lwezingxenye ekusetshenzisweni kokugaya i-CNC ngokuvamile kudinga kuphela ukuxhumeka kwe-axis ezimbili noma ukuxhumana kwe-axis ezintathu komshini wokugaya we-CNC kusetshenzwe. Phakathi nenqubo machining, indawo machining kuyinto ebusweni ukuxhumana ithuluzi, futhi ekupheleni Mills noma inkunzi ekhaleni imimese ingasetshenziswa anolaka futhi aqede machining.
(2) Milling izingxenye ebusweni
Isici sezingxenye zobuso ezigobile ukuthi indawo eyenziwe ngomshini iyindawo evulekile egobile. Ngesikhathi sokucubungula, indawo eyenziwe ngomshini kanye ne-cutter milling ihlale ixhumana nephuzu. Ukuqedwa kobuso kwenziwa ikakhulukazi ngomshini wokuqeda ibhola.
Izinzuzo ze-Ouzhan carbon steel milling service
- Yonke imikhiqizo enembile ye-CNC yensimbi yensimbi ingaphansi kokuhlolwa kwekhwalithi eqinile.
- Ngokuya ngemidwebo noma amasampula wokwenza ngokunemba izingxenye zensimbi yekhabhoni yensimbi.
Langaphambilini Izingxenye ze-OEM zensimbi ezingenasici ze-CNC zezingxenye zemishini